Baqdin laga qabo inay Somaliya cunta-yari soo foodsaarto
Buluugleey May 19, 2005
Khubaro ka socota urur ay maalgeliso USAID aya saadaalinayo cabsi laga qabo in Soomaaliya ay soo foodsaarto cunta-yari iyo abaaro dhallin karta macluul, taasoo ugu wacan roobabkii Gu'ga oo ka dib dhacay xilligii wax beerashada. Ururkaas oo saldhigiisu yahay cariga Mareykanka una qaabilsan sadaasha cunta-yarida ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano (FEWS NET) ayaa sheegay in dad lagu qiyaasayo hal Millyan oo ruux ay u baahan yihiin in lala gaaro gargaar cunto deg-deg ah.
Wuxuu ururkaas (FEWS NET) tibaaxayaa in fasalkan badarkii ka soo go’i lahaa inta u dhaxeysa dhulbeereedka labada webi: Jubba iyo Shabelle ay kadib dhacday waqtiyadii la filayay oo ahayd muddada u dhaxeysa April ilaa Juun. Waxaa kaloo jirta sabababo la xiriira dhibaatooyin sida fatahaadda webiyada iyo abuur xumo keentay inaysan beeraleydu beeran dalag ku filan.
Dhulka ay beeraleydu tacbato ayaa ahaa boqolkiiba 50% kuwa dabooli kara baahida cuntada ee dalka Soomaaliya ka jirta. Waxaana ugu wacan coladaha ka dhacaya meelo badan ee dalka ka mid ah sida gobolka Bakool, Gedo iyo Jubada hoose oo ah kuwo ay ka barakaceen dad badan oo beeraley iyo xoolo dhaqto iskugu jiraan oo aaggaasi ku dhaqnaa.
Wargeyska Bariga Dhexe (Middle East Online) war aan ka soo xiganay ayaa sheegaya in Soomaaliya oo ilaa hadda aan lahayn dowlad hanan karta ammaanka dalka ay keentay nabadgelya xumo la soo deristay shaqaalaha ururada samafalka ee u adeega umadda ku dhibaateysan dalka.